Xiaomi waxay soo bandhigeysaa xukunkeeda wireless-ka ah ee Mi Charge Turbo | Androidsis
Xiaomi waxay soo bandhigeysaa Mi Charge Turbo, oo ah lacag la'aan wireless lacag la'aan ah
Lacag la'aan wireless, labadaba waa caadi sida gadaal, waxay kasbadeen joogitaanka magacyada kujira Android. Xiaomi hadda waxay nooga dhigeysaa horumar muhiim ah arimahan. Tan iyo markii soo saaraha Shiinaha uu leeyahay si rasmi ah loogu soo bandhigay My Charge Turbo. Waa xukunkeeda wireless-ka oo deg deg ah, oo awood u leh 30 W.
Waa 30-kii ugu horreeyay ee bilaashka ah ee wireless-ka ah ee lagu soo bandhigo suuqa. Marka waa horumar muhiim u ah Xiaomi. Sumadda Shiinaha ayaa dhowaan ku isticmaali doonta mid ka mid ah taleefannadeeda, Mi 9 Pro 5G, sida ay horeyba ugu xaqiijiyeen soo bandhigiddooda. Marka lagu daro inaad nooga tagto laba qalab oo cusub.
Tiknoolajiyaddan ay soo bandhigtay Xiaomi ayaa kuu oggolaan doonta inaad bateriga si dhaqso ah uga qaadatid. Sida ay shirkaddu ku sheegtay soo bandhigideeda, waxaa suurtagal noqon doonta in bilaa xadhig looga dallaco a 4.000 mAh baytariyada kaliya 69 daqiiqo. Telefoonka aan soo sheegnay ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee adeegsada. Qaabkan waxaa la bilaabi doonaa dhamaadka bisha.
Intaa waxaa dheer, tikniyoolajiyaddan calaamadeysan ayaa sii socon doonta. Sababta oo ah shirkadda ayaa qabata horey u tijaabisay awood 40 W. Iyagu waxay ku sheegeen bandhiggan, markaa way iska caddahay inay qorshooyin badan ka leeyihiin arrintaas. Laba qalab cusub oo lacag lagu raadsado ayaa sidoo kale la soo saaray.
Saldhig lacag bixin iyo xeedho, kuwaas oo la jaan qaadaya tiknoolajiyaddan cusub ee Xiaomi. Labaduba waa inay iibiyaan bishaan, marka Mi 9 Pro 5G si rasmi ah suuqa looga bilaabay. Waa saldhig la yiraahdo Fan-qaboojiye Wireless Charging Stand, 30 W, iyo dhinaca kale, Smart Tracking Wireless Charging Pad xeedho, 20 W.
Sidaa darteed, Xiaomi wuxuu nooga tagayaa iyada oo si xawli ah u socota lacag la'aan suuqa. Daqiiqad muhiim ah oo arrintan la xiriirta, taas oo shaki la'aan muujineysa horumarka calaamadda Shiinaha xagga horumarka. Dhamaadka bishaan waxaan la kulmi doonnaa taleefankan ugu horreeya ee adeegsada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi waxay soo bandhigeysaa Mi Charge Turbo, oo ah lacag la'aan wireless lacag la'aan ah
Motorola One Zoom waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Nvidia Shield TVs waxay la kulmaan dhibaatooyin markii ay ku ciyaarayaan waxyaabaha 4K barnaamijyada qaarkood